December | 2009 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Aria and Arahat
Posted on December 30, 2009 by chitnge
အရိယာ နှင့် ရဟန္တာ ရဟန္တာတိုင်းသည် နိဗ္ဗာန်မြင်သော်လည်း နိဗ္ဗာန်မြင်သူတိုင်းသည် ရဟန္တာဟု မဆိုလိုပါ။ နိဗ္ဗာန် မြင်နိုင်သူများသည် ရဟန္တာများဖြစ်၍ အရိယာဟူသည် ၄ မျိုးရှိရာ သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ် များလည်း နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ရဟန္တာဖြစ်မှ နိဗ္ဗာန်မြင်သည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ရဟန္တာမြင်သော နိဗ္ဗာန်သည် ရဟန္တာ သိနားလည်သော နိဗ္ဗာန်၏ ဗဟုသုတများကို ရဟန္တာတပါးပီပီ ရရှိသိမြင်ပေါက်ပိုင်နိုင်သော်လည်း ကျန်အရိယာများ ဥပမာ သောတာပန်၊ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်	|2Comments
A Glimpse for Truth To The World Ebook
Posted on December 27, 2009 by chitnge
Latest publishing of Dr Chit Nge A Glimpse for Truth To The World is available as e-book. You can find more e-books in Dr Chit Nge’s Book Gallery. No tags for this post.
Explanation of visualizing Nibbana
Posted on December 25, 2009 by chitnge
နိဗ္ဗာန်နဓာတ်ကိုတွေ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် သိပ္ပံသမိုင်းတွင် အိုင်းစတိုင်းမပေါ်မှီက ဘလက်ဟိုး(လ်)(Black Hole)အကြောင်းကို မစဉ်းစားမိနိုင်ခဲ့ကြချေ။ ထို့အတူ မော်လီကျူး(Molecule) လောက်ကို သိစဉ်က ကွာ့(တ်)(Quark)အကြောင်းကို မစဉ်းစားမိခဲ့ကြချေ။ထို့အတူ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မကျင့်ဖူးသူများက နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ထိထိရောက်ရာက် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အမှန်အကန်သိရန် မကြိုးစား မစမ်းသပ် မသိနိုင်ခဲ့ကြပေ။ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျင့်လိုက်သဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားပြီ။ နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ပြောနိုင်ပြီ။ ဝမ်းသာဖွယ်ရာကောင်းသည်မှာ နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ယခုထက်တိုင် ဆက်လက် အသက်ရှင်သန်နေသေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူမသေမချင်း နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကို ပီပီသသနှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ မှန်မှန်ကန်ကန် ရေလည်အောင် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| 1 Comment
The Highest Triumph of Human Knowledge
လူသားတို့၏အထွတ်အထိပ်အသိပညာ ”The Highest Triumph of Human Knowledge” ခေါ် လူသားတို့ သိနိုင်စွမ်းသော အထွတ်အထိပ်ပညာကို ကိရိယာဖြင့်မရနိုင်။ လူသားတို၏ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကျင့်စဉ်ဖြင့်သာ ရနိုင်သည်။ ဤအချက်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များလည်း မသိသေးချေ။ သိပ္ပံပညာရပ်ကြီးကလည်း မသိသေးချေ။ သိပ္ပံပညာရပ်ကြီးသည် ကိရိယာကိုအားကိုး၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ယင်းကား ယခုအချေအနေအထိ မှန်ကန်လေသည်။ သို့သော် ဟော့ကင်းဦးဆောင်၍ ကြွေးကြော်ခဲ့သော ”The Highest Triumph of Human Knowledge” ခေါ် လူ့အသိပညာဆိုင်ရာ အထွတ်အထိပ်ပိုင်းကိုမူ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, အတ္တ	| Leaveacomment
Four Kinds of Leap
Posted on December 19, 2009 by chitnge
Four Kinds Of Leap Audio No tags for this post.
သိပ္ပံပညာဘာလဲ? ဘယ်လဲ? သိပ္ပံသည် လောကီ၌တော်ပါသည်။ သို့သော် လောကုတ္တရာ မလေ့လာသဖြင့် ခေတ်နောက် ကျသည်။ သိပ္ပံသည် မြန်မာစကားပုံနှင့်တင်ပြရသော် ဆန်စင်ရာ ကျဉ်ပွေ့လိုက်နေသည်။ ထိုအခါ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်။ သိပ္ပံပညာကြောင့် အဖျက်လုပ်ငန်းများအတွက် လူသားတို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေရသည်။ သိပ္ပံသည် အစွမ်းသက်သက်သာ လေ့လာ၍ အကျင့်ပိုင်း မေတ္တာတရား မလေ့လာနိုင်။ သိပ္ပံသည် ဘာသာရေးကို ပယ်သဖြင့် ခေတ်နောက်ကျသည်။ သိပ္ပံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မလေ့လာသဖြင့် ဗဟုသုတ မရှိချေ။ သိပ္ပံသည် နိဗ္ဗာန်အရှိတရားကို နားမလည်သဖြင့် လိုင်းအောက် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံ မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် သိပ္ပံ မြန်မာနှင့်ကမ္ဘာ သိပ္ပံတော်ပါသည် လောကီအရာ၌ တော်ပါသည်။ သို့သော် သိပ္ပံကိုလိုအပ်သည်ထက်ပို၍ မွှန်းကာ အရမ်းအထင်ကြီးလာသောအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နှိမ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထင်သေးစ ပြုလာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆများ မှေးမှိန်လာသည်။ ဤကိစ္စမှာ မဖြစ်သင့်ပါ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လောကုတ္တရာ အမှန်တရားဖြစ်သည်၊ သိပ္ပံသည် လောကီအမှန်တရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ့်တန်ဖိုးနှင့်ကိုယ် ထိုက်တန်ရုံသာ သတ်မှတ်ခြင်းခံယူသင့်သည်၊ သိပ္ပံကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ အထင်ကြီးသောအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အထင်သေးသကဲ့သို့ ဖြစ်လာသည်၊ ဤအခြေအနေမှာ မလိုလားအပ်ပါ။ Tags: Buddhism, … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, သာသနာ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
လူသားအားလုံး ဝမ်းသာတော့ …
Posted on December 14, 2009 by chitnge
လူသားအားလုံး ဝမ်းသာတော့ … လူသားအားလုံး ဝမ်းသာတော့ … ထိုထက်ပြောရလျှင် (၃၁)ရှိ ရုပ်နာမ်သားများ အားလုံး ဝမ်းသာလော့ – မြန်မာနိုင်ငံ၌ သစ္စာပေါက်မြောက်သူ ပေါ်ထွန်းပြီ။ သိပ္ပံပညာရှင်များ လိုလားနေသော The Highest Triumph of Human Knowledge လူ့အသိပညာ အထွတ်အထိပ်ပိုင်းကို အောင်မြင်သွားပြီ၊ နိဗ္ဗာန်ကို မြင်သွားပြီ။ အများမဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။ Tags: Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်	| 29 Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာများအတွက် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် သစ္စာတရားသိရန် ပူပင်ကြောင့်ကြစရာ မလိုပါ။ မိမိကိုယ်တိုင် ရှိသည် ကူညီမည်၊ မိမိတွေ့ပြီးသား သစ္စာတရားဖြစ်၍ မိမိအဖို့ ပြန်လည်ရှင်းပြရန် ဝန်လေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာများအပေါ် စေတနာလည်း ရှိပါသည်။ အခြားကိစ္စဘာမှ မပြောလိုပါ ဗုဒ္ဓဘာသာများ အတွက် သစ္စာတရားသိလိုလျှင် မကြောင့်ကြ မပူပန်တော့နှင့်ဟု အားပေးလိုသည်။ No tags for this post.
ဝေဖန်နိုင်ပါသည် သို့သော် …
ဝေဖန်နိုင်ပါသည် သို့သော် … မိမိသည် ထူးခြားသော သစ္စာအမှန်တရားကို သိရှိထားသဖြင့် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များက ၁) ယုံကြည်မှု မရှိဟု ယူဆနိုင်သည်။ မယုံကြည်သူများအတွက် မပြောလိုပါ။ ၂) ဝေဖန်လိုသူများပေါ်နိုင်သည်။ No tags for this post.
Good News for all human beings
လူသားများအတွက် သတင်းထူး လူသည် အမှန်သိရန်လိုသည်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အမှန်ကိုရှာသည်ဟုတော့ ဆိုကြသည်။ သို့သော် အမှန်သစ္စာသည် လောကီ၌မရှိ လောကုတ္တရာ၌သာ နက်နဲစွာ ကိန်းအောင်းသည်။ ထို့ကြောင့် လောကုတ္တရာကို မလိုက်စားသော သိပ္ပံသည် အမှန်ကိုမတွေ့နိုင်၊ ၄င်းတို့တွေ့သောအမှန်တရား ဆိုသည်မှာ သာမည အပေါ်ယံအမှန်တရားမျှသာ ဖြစ်သည်။ အနှစ်သာရ အတွင်းသဘော အမှန်တရားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၌သာ ရှိသည်။ မိမိသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်ရာ အမှန်တရားကိုတွေ့ပြီ။ ထို့ကြောင့် လူသားအားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းကို ပေးလိုက်ပြီ၊ သတင်းမှန်ကို ပေးလိုက်ပြီ၊ အကျိုးရှိသော သတင်းကို … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်, လောကုတ္တရာ	|6Comments
Weakness of Scientists
သိပံ္ပပညာရှင်များ၏အားနည်းချက် သိပ္ပံပညာရှင်ဟော့ကင်းက ပြောဖူးသည်။ ”We want to have The Highest Triumph of Human Knowledge.” အဓိပ္ပါယ်မှာ လူ့အသိပညာ၏အထွတ်အထိပ်ကို ရလိုသည်ဟု ပြောဖူးသည်။ ယင်းကိစ္စမှာ သိပ္ပံပညာဖြင့် မဖြစ်နိုင်။ သိပ္ပံပညာသည် စကြဝဠာ၏ အပိုင်းအစ များကိုသာ နားလည်နိုင်သည်။ လူ့အသိပညာ၏ အထွတ်အထိပ်ကိုမူ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်သည်။ လူ့အသိပညာ၏ အထွတ်အထိပ်ကို ကိရိယာသုံး၍ မရနိုင် လူ့အသိပညာ၏ အထွတ်အထိပ်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောမိန့်တော်မူသော ဗုဒ္ဓဘာသာကျင့်စဉ်ဖြင့်သာ ရနိုင်သည်။ ဤကိစ္စ၌ … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, နိဗ္ဗာန်, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
တရားရသည်ဆိုသည်မှာ မိမိတရားရသည်ဆိုသည်မှာ ဆရာကောင်းဆရာမြတ်ထံ ချဉ်းကပ်ခွင့် ရခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဆရာကောင်း ဆရာမြတ်သည် ယခုအခါ ခန္ဓာဝန်စွန့်တော်မူသွားသဖြင့် လွန်စွာမှ နှမြောစရာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ကောင်းသည်။ သို့သော် ဖြေသာသည်မှာ မိမိက ရလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆရာကောင်း ဆရာမြတ်များ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မိမိတပည့်ကို အရိယာဖြစ်အောင် ဆုံးမသွန်သင် စွမ်းဆောင်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဤအချက်ကို မိမိသည် ယခုမှပိုမို၍ ဂဃနဏ ကျကျနန နားလည် သဘောပေါက်ကာ ပြန်လည်ရှင်းပြနိုင်တော့သည်။ Tags: Buddhism, … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, နိဗ္ဗာန်	| Leaveacomment